တရုတ်-ဆော်လမွန်ကျွန်း လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက ပွင့်လင်း၍ တရားမျှတမှုရှိကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆို - Xinhua News Agency
တရုတ်-ဆော်လမွန်ကျွန်း နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ပွင့်လင်း၍ တရားမျှတမှုရှိသည့်အပြင် ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းမရှိကြောင်း၊ ၎င်းမှာ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေနှင့်ညီကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က မေ ၁၂ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ကျောက်လီကျန်းက “တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ဆော်လမွန်ကျွန်းနိုင်ငံ ရဲ့ လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ အပြန်အလှန်လေးစားခြင်းနဲ့ တန်းတူညီမျှ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခြင်းအပေါ်မှာ အခြေပြုပါတယ်၊ အဲဒီဆက်ဆံရေးဟာ ဆော်လမွန်ကျွန်းနိုင်ငံနဲ့ ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုမြှင့်တင်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး တောင်ပစိဖိတ်ဒေသကိုလည်းအကျိုးစီးပွားဖြစ်စေပါတယ်၊ တရုတ်-ဆော်လမွန်ကျွန်းနိုင်ငံ လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ ပွင့်လင်းမှုရှိပြီး တရားမျှတတဲ့အပြင် ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး၊ ဒါဟာ တရားဝင်ဖြစ်ပြီး ဥပဒေနှင့်လည်းညီပါတယ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် သြစတြေးလျ ဘက်ကလည်းဆော်လမွန်ကျွန်းနိုင်ငံကို သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာသာရှိစေပြီး တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆော်လမွန်ကျွန်းနိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံရေးကို လက်မခံလိုကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာအနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလား။ သြစတြေးလျနိုင်ငံက အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဆော်လမွန်ကျွန်းနိုင်ငံရဲ့ အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ လွတ်လပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှောင့်ယှက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ သြစတြေးလျနိုင်ငံက ဒေသတွင်းမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ လျှို့ဝှက်သဘောတူညီမှုတစ်ခုလုပ်ဆောင်ပြီး စစ်ရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့၊ နျူကလီးယားပြန့်ပွားမှုအန္တရာယ်ကို တိုးမြှင့်ပြီး ဒေသတွင်းတင်းမာမှုတွေကို မြှောက်ပင့်ပေးဖို့နဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးဖို့ကြံရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မဟုတ်ဘူးလား၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ အမှားကိုအမှန်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြံတဲ့ ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေနဲ့ “မခိုးပါနဲ့လို့အသံကောင်းဟစ်နေတဲ့ သူခိုးတစ်ယောက်ရဲ့ လှည့်ကွက်”တွေကို ရပ်တန်းကရပ်လိုက်ပါ ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆင်ဟွာသတင်းထောက်များက ပေကျင်းမှသတင်းပေးပို့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
GLOBALink | China-Solomon Islands security cooperation is open and above board: FM spokesperson
BEIJING, May 12 (Xinhua) — “The China-Solomon Islands security cooperation is open, above board and beyond reproach. It is legitimate and lawful,” saidaChinese Foreign Ministry spokesperson on Thursday.
SOUNDBITE (Chinese/English interpretation): ZHAO LIJIAN, Chinese Foreign Ministry spokesperson
“China’s security cooperation with Solomon Islands is based on mutual respect and equal footed consultation. It is conducive to promoting social stability and long-term peace in Solomon Islands, and in line with the interest of the South Pacific region. The China-Solomon Islands security cooperation is open and above board and beyond reproach. It is legitimate and lawful. By contrast, Australia claims the Solomon Islands to be its own ‘backyard’ and wants to setared line for security cooperation between China and Solomon Islands. Isn’t this coercion? Australia tries every means to obstruct Solomon Islands’ right to conduct independent cooperation with other countries, which isasovereign right. Isn’t this interference? Australia also reaches an underhand deal with non-regional country to patch up military block and increase the risk of nuclear proliferation to instigate regional tension and seek hegemony. Isn’t this an act for hegemonic purpose? The Australian politician should stop such move to confuse right with wrong and the trick ofathief crying ‘stop thief.'”